दुवै मिर्गौला खराब भएकी २० वर्षीया युवतीद्वारा सहयोगको याचना » खबरहरुको एउटै केन्द्र
दुवै मिर्गौला खराब भएकी २० वर्षीया युवतीद्वारा सहयोगको याचना
सोमबार, असार ४, २०७५ १०:०८ मा प्रकाशित !
बेनी, म्याग्दी। बेनी नगरपालिका– २ गौश्वाराकी २० वर्षीया तारा शर्माको दुवै मिर्र्गौला खराब भएपछि पोखरा स्थित मणिपाल अस्पतालको श्ययामा छट्पटाइ रहनुभएको छ ।
शर्माले आर्थिक सहयोग गरी आफ्नो जीवन बचाइदिन याचना गरिरहनुभएको छ । उहाँ दुई महिनादेखि मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराउँदै आउनुभएको छ । आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर भएकी शर्मालाई हप्तामा दुई पटक डायलसिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
एक पटक डायलसिस गरे रु पाँच हजार खर्च लाग्छ । दुवै मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न रु नौ लाख लाग्ने शर्माका दाजु गोकुलले बताउनुभयो । “घरको अवस्था दयनीय छ, कमाइ केही छैन, मिर्गौला प्रत्यारोपण त परको कुरा भयो, डायलासिस गर्ने र औषधि किन्ने खर्चसमेत छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
दुई महिनादेखि छोरीको उपचारमा खट्नुभएका खडानन्द थकित अवस्थामा हुनुहुन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा मलेशिया गएका छोरा गोकुल बिरामी परेर घर फर्किनु भएको छ । “भएको सम्पत्ति छोराको उपचारमा सकियो, अब छोरीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न रुपैयाँ छैन,” ६८ वर्षीय खडानन्दले भन्नुभयो ।
PREVIOUS POST Previous post: विश्वकप फुटबल विशेष : आज तीन खेल हुँदैं, अहिलेसम्मको यस्तो छ नतिजा
NEXT POST Next post: अफगाननिस्तान सरकारको प्रस्ताव तालिवानद्वारा इन्कार
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते सोमबार, असार ४, २०७५ १०:०८
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस सोमबार, असार ४, २०७५ १०:०८
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण सोमबार, असार ४, २०७५ १०:०८
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी सोमबार, असार ४, २०७५ १०:०८
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? सोमबार, असार ४, २०७५ १०:०८